Amathiphu wokonga isikhala ku-HDD yethu futhi uhlanze uhlelo lwethu | Kusuka kuLinux
Amathiphu wokonga isikhala ku-HDD yethu futhi uhlanze uhlelo lwethu
Lapho sidinga isikhala sinezinketho eziningi zokuthola ama-MB ambalwa, lapha ngizokhuluma ngamathiphu wokuthola isikhala ku-HDD yethu.
1 1. Ukususa izinhlelo zokusebenza esingazisebenzisi.
2 2. Ukususa amafayela kusuka kunqolobane yesifaki.
3 3. Sisusa izilimi ohlelweni lwethu esingazikhulumi.
4 4. Ukususa amafolda nezilungiselelo kusuka Ekhaya lethu.
5 5. Isusa izinhlobo zekernel ezingasazisebenzisi.
6 6. Susa amafayela ayimpinda ohlelweni lwethu.
7 7. Ukusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ukuhlanza uhlelo lwethu.
8 8. Qeda
1. Ukususa izinhlelo zokusebenza esingazisebenzisi.
Akuyona imfihlo ukuthi abasebenzisi beLinux bafaka izinhlelo eziningi bese bebehlisa. Isibonelo, thina esidinga ukuhlola amawebhusayithi kwiziphequluli ezahlukahlukene ukubheka ukusebenza esithanda ukufakwa kuziphequluli eziningana, kimi ngineKonqueror, iChromium, iRekonq, i-Opera neFirefox. Kodwa-ke, iKonqueror, iRekonq neQupzilla zicishe zifane, singashiya eyodwa kuphela kulezi ezintathu ne-voila. Singasusa nezinhlelo kusuka kusistimu yethu uma ine-'poppart 'online, isibonelo ngisanda kukhishwa PokerTH Yebo, ngicabanga ukuthi ngincamela ukudlala i-poker online ngqo kusuka kusiphequluli.
Ngamafuphi, kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza esinazo futhi okubaluleke kakhulu, izinhlelo esizidingayo.
2. Ukususa amafayela kusuka kunqolobane yesifaki.
Labo bethu abasebenzisa amaphakheji we-.DEB (ama-Debian kanye nama-derivatives) anakho ku- / var / cache / apt / archives / amafayela amaningi we-.deb, imvamisa le folda ingadla amakhulu ambalwa we-MB ngisho nama-GBs ambalwa, lokhu kuya ngokuthi sigcine nini ukususa lawa mafayela.
Kwamanye ama-RPM distros noma amanye (i-ArchLinux, njll) anefolda yawo yalezi zinhlobo zamafayela, ngokuvamile atholakala ngaphansi kwe- / var / cache /.
Iseluleko ukusula amafayela atholakala lapha ngezikhathi ezithile.
3. Sisusa izilimi ohlelweni lwethu esingazikhulumi.
Esikhathini esithile esedlule ngakutshela ngakho umabhebhana, iphakethe elisivumela ukuthi sichaze izilimi esifuna ukuzigcina kusuka kuzinhlelo zokusebenza (Ex: iSpanishi nesiNgisi) nazo zonke ezinye izilimi zezinhlelo zokusebenza ezifakiwe (isiCzech, isiFulentshi, njll.) zizoziqeda. Ngigcina ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza yangisindisa cishe ama-500MBs s
Funda: Gcina amakhulu we-MB kukhompyutha yakho nge-localepurge
4. Ukususa amafolda nezilungiselelo kusuka Ekhaya lethu.
Ekhaya lethu kunamafolda nezilungiselelo ezimbalwa esingazenza ngaphandle. Ngokwesibonelo:
Ifolda .izithonjana ingalinganisa amashumi ama-MBs, kimi .izithonjana inesisindo esingaphezu kuka-300MB. Lapha izithonjana (ukubuka kuqala) kwamafayela wemultimedia ziyagcinwa, uma ufisa ungasusa okuqukethwe yile folda bese ugcine amanye ama-MB.
Ifolda yesithonjana (.icons ó .kde / share / icons uma basebenzisa i-KDE). Amaphakheji wesithonjana kanye nezikhombisi ezifakiwe zigcinwa lapha, ANGIKUTHI ngincoma ukususa yonke ifolda, kepha kuwumqondo omuhle ukususa amaphakheji wesithonjana ongawasebenzisi. Endabeni yami .icons inesisindo cishe esingu-1GB… O_O WTF!
Ifolda .isilondolozi iqukethe inqolobane yezinhlelo zokusebenza eziningana, kimi enginayo kule folda: chromium (Inqolobane yesiphequluli seChromium, inesisindo esicishe sibe ngu-XP), mozilla (iqukethe i-Firefox cache, isisindo sayo cishe singu-90MB), Thunderbird (iqukethe isilondolozi seThunderbird). Ungasusa amafolda lapha uma ufuna 😉
Amafolda okulondolozwa kwesiphequluli sakho. Isiphequluli engisisebenzisa kakhulu yi-Opera, isilondolozi se-Opera sigcinwa kuso .opera / isilondolozi / (eyami ingaphezu kuka-400mb), uma ungenayo inkinga nge-bandwidth yakho kuwumkhuba omuhle ukusula i-cache yesiphequluli ngezikhathi ezithile.
Bangasusa amanye amafolda amasethingi wohlelo abangasasebenzisi wona, izinhlelo asebevele bezisusile ohlelweni, namafolda amasethingi abo asekhona lapho athatha isikhala esikhulu.
Lawa mafolda engiwashilo ngenhla angama- amafolda afihliwe, igama layo liqala ngenkathi . yini eyenza zifihlwe. Ukuzibonisa kufanele zisebenzise inketho Khombisa amafayela afihliwe kusiphequluli sakho sefayela (iDolphin, iNautilus, iThunar, njll)
5. Isusa izinhlobo zekernel ezingasazisebenzisi.
Sikhulume ngalokhu isikhashana esedlule. Umqondo ulula, cishe njalo sifinyelela ukusebenzisa i-kernel enenguqulo ephezulu kakhulu, esanda kuba nayo kakhulu ohlelweni ... ngakho-ke, liyini iphuzu lokuthi kufakwe ezinye izinhlamvu ezi-3 no-4? Ukususa izinhlobo zekernel esingadingi ukuthi zifundwe: Susa izinguqulo zangaphambilini zekernel esingazisebenzisi
6. Susa amafayela ayimpinda ohlelweni lwethu.
Kuwo wonke amasistimu kunamafayela ayimpinda, amafayela okungenzeka ngokwawo awakwazi ukuhlala isikhala esikhulu kepha engezwe ndawonye angaba nzima kakhulu. Ukucinga amafayela ayimpinda sizosebenzisa uhlelo duff, besivele sikhulume ngayo (ukufakwa nokuthi uyisebenzisa kanjani) ku: Thola bese ususa amafayela ayimpinda kusistimu yakho nge-duff
7. Ukusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ukuhlanza uhlelo lwethu.
Kakade umngane wethu Alf Wabuye wabelana nathi ngamathiphu ambalwa kokuthunyelwe: Hlanza uhlelo lwethu
Lapho ubalula ezinye izicelo ezinjenge Isikhokhelo, I-Deborphan futhi, kumazwana abanye kukhulunywa ngabo njenge BleachBit. Yizinhlelo zokusebenza (ezinye ihluzo) ezingakusiza ukuhlanza uhlelo, ezinye zingahle zenze lo msebenzi ngenxa yobulula bazo, kwezinye izimo ngincamela ukusebenzisa i-terminal 😉
Ngamafuphi, isitatimende sokuthi ku-Linux uhlelo alugcwele 'udoti' kuyinto engalungile ngokuphelele, lonke uhlelo 'lungangcola' kepha ngokunembile lokhu ukuthi lezi zinhlelo zokusebenza zikhona, ngoba lokhu ukuthi sibeka lezi zeluleko 😉
Ngiyethemba ukuthole lokhu kujabulisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Amathiphu wokonga isikhala ku-HDD yethu futhi uhlanze uhlelo lwethu
Amathiphu amahle !!!
Ku-arch linux ungasula futhi isilondolozi sohlelo lwephakeji (Ngokusobala uma ucabanga ukuthi ngeke uzisebenzise futhi uhlelo lwakho luzinzile):
pacman -Scc (enezimvume zezimpande)
Futhi / noma susa ukuncika okungadingekile:
I-sudo pacman -R $ (pacman -Qdtq)
Lo myalo muhle, Ngiyabonga »!
Kufanele uqaphele lo myalo ngoba ungasusa iphakethe elidinga uhlelo esiluhlanganisayo, noma lokho kungakhethwa kepha uma siludinga noma ukuthi alukho uhlelo oluthile oludingayo (ngokwesibonelo bzr noma git)
Kuyathakazelisa kakhulu, manje ngizama i-localepurge, izinhlamvu kanye nezinqolobane (ngineMidori, i-Opera, iChromium, iFirefox futhi ngethemba ukuthi ayikho enye i-xD).
Ilungile, ihlolwe ku-Arch ... ake sibone:
localepurge (iku-AUR): Ngibuyile cishe ngo-350MB Oo
Susa izinhlamvu: noma ngabe ayizisindisi, noma bengingazi ukuthi ngikwenza kanjani xD
Inqolobane: ukususa eyodwa yeChromium, Firefox ne-Opera ngithole kabusha okungu-300MB ngaphezulu.
Sula amaphakheji kusuka kunqolobane yePacman: enye i-400MB.
Susa ukuncika: Angiwuthandi lowo myalo umngani uGeoMixtli awubhalile ngenhla, ngoba uzama ukususa konke, ngisho nezinto engizisebenzisa njengeGit, BZR, SVN nezinye ngoba zifakwe ngesikhathi sazo njengokuncika. ..
Ukususa ukuncika okuphelelwe yisikhathi kungakuhle ukuthi wenze iPacman -Qdt bese ubona ukuthi awusebenzisi futhi ususe ngesandla.
Yiqiniso !!! Ngikhohliwe ukukusho lokho !! I-LOL- Epic FAIL !!
(ngiyaxolisa futhi ngiyabonga uVicky ngokucacisa)
I-Localepurge iyindlela ephumelela kunazo zonke yokukhulula isikhala.
Futhi ukususa izinhlamvu ezindala yize manje ama-distros amaningi enakekela lokho ngokuzenzakalela.
I-athikili enhle! Hug! UPaul.
Ngingancoma amathuluzi we-tweak, inesigaba esikuvumela ukuthi ususe i-cache, amaphakheji aphelelwe yisikhathi noma awonakele, izinhlobo ze-kernel ezehlisiwe njll njll.
Ngisebenzisa iBleachBit futhi iyamangalisa. Isitayela seCCleaner
Ngincoma iDupeGuru ukuthola izimpinda.
Ingabe unayo inguqulo ye-Linux?
Yebo, ngiyifakile kuma-elementaryOs wami
Yebo, bakwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngincoma futhi i-fslilnt-gui
Izeluleko ezinhle kakhulu 😀 Ngizosebenzisa ezinye
Qaphela kakhulu lapho usebenzisa i-localepurge, ngivele ngiyisebenzise, ​​ngigcina iSpanishi esobala, futhi yangishiya zonke izinhlelo ezihhafu zihunyushelwe esiNgisini ... akulungile.
Angikwazanga ukuyixazulula, uma kukhona owaziyo nganoma iyiphi indlela, ngicela ungitshele ...
Kunconywa ukumaka isiNgisi nezinhlobo eziningana zeSpanishi (ngikwenze kanjalo futhi akuzange kunginike izinkinga)
Ukuyilungisa kuzodingeka ukhiphe i-localepurge bese ufaka kabusha izinhlelo ezihunyushwe ngesigamu
Ngiyabonga kakhulu ngempendulo yakho, kepha ngenxa yokuthi zonke izinhlelo zokusebenza zihlala zinje, kufaka phakathi ezisohlelweni, ngicabanga ukuthi kuzofanele ngifake kabusha iDebian ngokuphelele ¬¬
KuFedora (okungenani kimi), kuphela izinhlamvu zokugcina ezintathu ezifakiwe ezigcinwayo, lapho ufaka entsha isusa endala kunazo zonke, kepha ngiyakhumbula ukuthi kudala ngasebenzisa leyo thiphu.
Kuma-Arch nakokuphuma kukho kungcono ukusebenzisa i-pacman -Sc hhayi i-Scc ngoba eyokuqala isusa kuphela amaphakheji amadala bese kuthi eyesibili isuse ezindala nezintsha futhi lokho bekungeke kube nemiphumela emnandi kakhulu.
I-Bleachbit kimi isoftware enhle kakhulu yalezi zinhloso.
Futhi i-GNU / Linux akufanele yini "ishiye udoti ku-hard drive" njengoba kwenza iWindows?
Yilokho engikufunde kakhulu kokuthunyelwe kweWindows vs Linux ku-inthanethi.
Ngokuvamile kungamafayela amancane futhi imvamisa alusizo ukwedlula i-junk (isb. Amaphakheji afakwe ngaphambili angasetshenziselwa ukwehlisa isikhundla). Ngaphandle kokuthi awunaso isikhala esiningi ngokuvamile azibangeli izinkinga. Futhi kulula ukuzisusa.
Umehluko ukuthi ku-Linux lokhu akuphazamisi ukusebenza noma ukuzinza kohlelo, lawa macebiso ukukhulula isikhala sediski.
Ngakolunye uhlangothi, kwiWindows ayithathi nje kuphela isikhala kepha ngokuhamba kwesikhathi ithinta kakhulu uhlelo kuzo zonke izici.
Kunoma yikuphi ukufakwa kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza futhi lapho ulususa, noma ngabe lunjani uhlelo, izinsalela zihlala kunjalo.
Ngokusobala, njengoba iWindows ikhomba amafayili angena aphume, ngaphezu kokuwathumela kusikrini seMicrosoft ukuze awahlaziye (okuyinto i-Windows Vista screenfeth engasayenzi, ngoba leyo nguqulo yeWindows izofa ngo-2017).
Izeluleko ezinhle kakhulu! Ikakhulukazi amafolda e-cache!, Ngisanda kukhipha cishe i-3 Gb »»! kanye nefayela elingcolile elalidla i-hard drive yami, lalinesisindo cishe esingu-4 Gb »
Uma ufuna ukuphinda kabili isikhala samahhala se-HDD unayo kulula kakhulu: susa iWindows
Ayini amawindi? 😛
Lolo hlelo lokusebenza oluqale njenge-DOS GUI futhi lwagcina luyi-OS edume kakhulu futhi ethandwa ngenkani yi-Microsoft.
Amathiphu amahle kakhulu yize ngicabanga ukuthi ngihlanzekile:]
Itimu enhle ngokwesibonelo eMageia 3 KDE 4.10.4 Ngisebenzisa i-Sweeper ukususa wonke udoti ku-inthanethi engiwusebenzisayo kanye ne-linux Mint 15 sinamoni ngisebenzisa iBleachBit
Ngiyaphila! Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ngalezo zinto. Ungenza iskripthi nge "cron" ukusula ngezikhathi ezithile ~ / .cache kanye ~ / .thumbnails (heavy!).
Kuyiqiniso futhi okushoyo ekuqaleni. Kuyalingwa ukufaka izinhlelo ezivela kumphathi wephakheji. Ngokwami, kwesinye isikhathi ngiyathanda ukuvivinya izicelo futhi uma zingangikholisi noma ngiyazi ukuthi ngizozisebenzisa kanye, ngizikhipha khona manjalo 🙂
Mina kuma-.bash_aliases ami nginalesi sibizo:
alias cclean = 'rm -rf .adobe .macromedia .thumbnails && notify-send –icon = gtk-remove "Sula inqolobane" ".adobe .macromedia .thumbnails → DONE"'
Ngicabanga ukuthi banayo yini into enjalo ye-fedora
Kuhle kakhulu. Futhi, kwiLinux, amafayela asalile awaphazamisi ukusebenza ngendlela enza ngayo kuWindows, ngoba iWindows ikhomba zonke izinto ezivuliwe, kufaka phakathi ezesikhashana (into ekuhlupha ngempela).
Yize ngingahle ngithathe isikhundla seDebian Stable enginayo ngeCrunchbang noma iSlackware, kepha manje sengikhululeke kakhulu ngale distro. Mhlawumbe faka iSlackware noma iCrunchbang enye i-PC yami yakudala.
Hhayi-ke, angijwayele ukusebenzisa i-chromium, (i-cache yesiphequluli se-Chromium, inesisindo cishe esingu-nangona kunjalo), kunesizathu esikhulu sokungayisebenzisi.
Amathiphu amahle, ngiyabonga.
Amathiphu amahle kepha okuhle kakhulu bekulahlekile futhi okuzuza isikhala esiningi.
Susa i-pr0n endala esingasayiboni, ngalokho singathola cishe i-100 GB
hahaha muhle kakhulu ngaleyo thiphu, ake sibheke ukuthi ngiyayisebenzisa yini kodwa angicabangi ukuthi izothola isikhala esinjalo ...
Uxolo ngokungazi kwami ​​kodwa ngizamile ukususa amafayela wesikweletu asendleleni / var / cache / apt / archives / futhi ayingivumeli (inketho enenkinobho yesokudla yegundane ayiveli). Ngicela, ungitshele ukuthi ngikwenze kanjani
Kufanele ufake leyo ndlela njengomlawuli.
Impande yami yeManjaro isebenzisa ama-7Gbs kokungu-25 engiwabele wona futhi angizihluphi ngokuyihlanza.
Imfucumfucu uma inganuki, ayisiyo imfucumfucu.Ayinciphisi uhlelo ukuthi ibe nezinhlelo ezingasetshenziswanga.
Ku-MS WOS yebo, kukhona ifayili lokubhalisa elinciphisa ikhompyutha ngokufaka nokuvuselelwa okuwukuhlanza udoti.
Masingasuki emibonweni ye-MS WOS ezinkingeni zabo.
Into eyodwa ukukhipha okungasetshenziswanga ukwenza isikhala, okunye ukuhlanza udoti - okungekho njenge-OS ehamba kancane ku-Linux yethu -
Siyabonga ngemininingwane, ilusizo kakhulu!
Ngifaka enye ithiphu ethakazelisa kakhulu ukuqeda ngokuzenzakalela okwesikhashana ngokuqala kabusha kohlelo ngalunye:
Ukuhlelwa kwezinkomba namafayela esikhashana kutholakala ku- /etc/tmpfiles.d ukuze amafayela wesikhashana asuswe ekuqaleni ngakunye, ifayela le-tmp.conf kumele lenziwe ngokuqukethwe okulandelayo:
D / tmp 1777 impande 1s
D / var / tmp 1777 impande 1s
Ngabe ukhona umuntu oncoma enye indlela yokwenza i-bleachbit yomugqa womyalo? Ngingathanda ukwenza iskripthi esincane esihlanza yonke into bese siyisebenzisa ngesinqamuleli